Madaxweyne Siilaanyo “Ma jirto wax aan ka weydiinayo Xasan Sheekh Dalkeyga iyo xuduudihiisa” – idalenews.com
Madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siilaanyo ayaa jawaab kulul ka bixiyay hadal dhowan uu saxaafada ka yiri madaxweynaha Soomaaliya xasan Sheekh Maxamuud.
Siilaanyo ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaliya uu ku been abuurtay islamarkaana aanu ka dhaxeynin wax xiriir ah oo hoose.
“Waa nasiib daro hadii uu sheegto oo wax qabad ka dhigto waraaqihii tahniyada madaxtinimada ee aan u diray, Ma jirto wax aan ka weydiinayo Xasan Sheekh Dalkeyga iyo xuduudihiisa.” Sidaasi waxaa yiri Madaxweynaha SOomaaliland.
Md Siilaanyo oo la hadlayay golaha wakiilada maamulkaas maanta ayaa sidoo kale sheegay in dowladiisa iyo tan Madaxweynaha Soomaaliya ay u dhexeyso oo keliya wada hadal ay dunidu u goleysay, balse aanu ka dhexeynin xiriir hoose oo gaar ah.
Ka dib ciidan ka tirsan Soomaaliland oo so gaaray bishan horaanteedii degmada taleex ee gobolka Sool ayaa mar uu ka hadlayay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh waxa uu sheegay in arintaas ay ka wada hadleen madaxda Maamulkaas siiba Madaxweynaha Siilaanyo.
Beeninta warkan ayaa imanaya xili madaxweynaha Soomaaliya uu ku jiro marxalad ay baarlamankiisa ugu heystaan arimo badan oo ay ka mid tahay tan maamulka Soomaalia ka mid ka ah ee Soomaaliland .
Idale News Online, Hargeysa.
Ra’iisal Wasaaraha oo ku sugan Magaalada MarkaCaddey iyo qarax khasaaro geystay oo ka dhacay.